Fantaro Ireo Sahrawis Roa Mpamokatra Lahatsary Sady Mpikatroka Sahy Nandrakitra An-tsary Ny Fanitsakitsahana Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Fantaro Ireo Sahrawis Roa Mpamokatra Lahatsary Sady Mpikatroka Sahy Nandrakitra An-tsary Ny Fanitsakitsahana Zon'Olombelona
Voadika ny 12 Mey 2016 4:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, Ελληνικά, English
Atrikasa lahatsary fisoloana vava an'ny WITNESS tao amin'ny toby Tindouf tamin'ny Febroary, 2016. Sary an'i Madeleine Bair.
Nosoratan'i Habibulah Mohamed Lamin
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratry ny Witness : Tamin'ny dia natao tsy ela akory izay tany amin'ny tobin'ireo Sahrawi mpitsoa-ponenana ao Tindouf, Alzeria, nihaona tamin'i Habibulah Mohamed Lamin, mpanao gazety tao an-toerana ny WITNESS. Ity fizaràna nataon'i Lamin ity dia ampahany amin'ny Watching Western Sahara, fandraisana andraikitra iray ataon'ny WITNESS Media Lab manangona sy mametraka ho ao anatin'ny vanimpotoanany ireo lahatsary momba ny zon'olombelona avy amin'ireo media Sahrawi mpikatroka. Tao amin'ny bilaogin'ny Witness izy ity no navoaka voalohany.
Tranolay miparitadritaka sy trano vita tamin'ny fotaka no tena mameno ilay tobin'ny mpitsoa-ponenana, izay mivelatra ao amin'ny tanihay ao Sahara, any amin'ny andrefan'i Alzeria. Noforonina izy ireny tamin'ny fotoana nakàn'i Maraoka an'i Sahara Andrefana ho azy tamin'ny 1975, ary vinavinaina ho olona 100.000 eo ankehitriny no monina ao, miankina amin'ny fanampiana noho ny maha-olona mba hahazoany ireo filàna fototra toy ny sakafo, rano ary fitafiana.
Nanangana fanjakàna ireo vahoaka Sahrawi tamin'ny 1976 ary nantsoiny hoe Repoblika Arabo Sahrawi Demaokratika, na SADR. Miasa an-tsesintany izy io any amin'ireo toby sy ampahan-tany fehezin'ny Polisario ao Sahara Andrefana. Taorian'ny nanekena ny fampitsaharana poabasy notarihan'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1991, niditra tamin'ny fikatsahana fomba am-pilaminana hitakiana ny zony hizaka tena ny Sahrawis. Ilay fifanekem-pilaminana dia nampanantena fitsapankevibahoaka iray hahafahan'ireo Sahrawis mifidy ny hahaleo tena, saingy tsy mbola izany no zava-misy.
31 taona i Brahim Dihani. Lehibe tao amin'ilay faritra Sahara Andrefana bodoin'ny Maraokàna izy, El Aaiun (fantatra koa amin'ny hoe “Laayoune”). Manana MAsters amin'ny asa fanaovana gazety i Dihani, ary mpikatroka mpiaro zon'olombelona. Miaraka miasa amin'ny fikambanana Sahrawi misy ireo Niharan'ny Fanitsakitsahana Henjana ny Zon'Olombelona nataon'ny Fanjakàna Maraokàna izy (na ny ASVDH) mba handrakitra ireo fanitsakitsahana mitranga any amin'ilay faritra sy hikarakarana fihetsiketsehana am-pilaminana.
Tonga tao amin'ilay toby i Dihani mba handray anjara taminà atrikasa iray nokarakarain'ny Fikambanan'ireo Sahrawi Mpianatra (na UESARIO). Nivory tao aminà efitrano iray lehibe ireo mpianatra 16 samy nangetaheta ny hanovo fahalalàna. Vantany vao nanontany azy ireo ny mpampianara azy mba hamantatra fomba fakàna sary, dia nanomboka ry zareo : ”midadasika, “tsia, tifi-davitra,” tao anatinà rivotra iainana feno fientanentanana/hafanampo.
“Tonga mba haka traikefa amin'ny fakàna sary aho mba hampiharako azy ireny rehefa tafaverina any aminay,” hoy i Dihani. Ho azy, sarotra ny hanao hetsi-panoherana ao Sahara Andrefana noho ny fandraràn'i Maraoka izay fivorivoriana rehetra ataon'ireo mpanao hetsi-panoherana.
Ny famoretan'i Maraoka ireo hetsi-panoherana dia olana iray efa hatry ny ela no noraketin'ireo vondrona iraisampirenena mpisolo vava sy ireo manampahefana avy amin'ny Firenena Mikambana. Nandritry ny fakàn-kevitra tamin'ny kaongresy momba an'i Sahara Andrefana tamin'ny volana lasa iny namorina ny Kaomisiona Tom Lantos Human Rights Commission, momba ny Zon'Olombelona, notsipihan'i Eric Goldstein avy amin'ny Human Rights Watch ny fanahian'ìreo fikambanana ireo, izay ahitàna ny “fanitsakitsahana ny zo hiteny malalaka, hanao fikambanana, fivoriana, ary ny zo hahazo fitsaràna tsy mitanila, ny fampijaliana mandritry ny fakàna am-bavany, ary ny herisetran'ny polisy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana.”
“Ny fanaovana vivery ny ainao,”hoy i Dihani, “dia manomboka fotsiny raha vao miala ny seranampiaramanidina El Aaiun ianao.” Araka ny nanazavàny azy, ny famoretana ny media izay iainany amin'ny ataon'ireo manampahefana Maraokàna dia dingana iray amin'ny fanarahana maso henjana. “Rehefa niverina nody aloha,” hoy izy nanampy, “dia efa andrasako ireo karazana fisavàna tsy ara-drariny rehetra toy ny fanesorana akanjo sy ny sisa”.
33 taona i Mariem Zafri, monina ao amin'ny faritr'i Smara bodoin'ny Maraokàna. Vao haingana izy no nahavita fiofanana iray momba ny lahatsary fisoloana vava ny zon'olombelona nokarakarain'ny FiSahara sy ny WITNESS.
Rehefa niverina avy any an-toby handeha hody tany Sahara Andrefana, nogiazana ny bokikeliny natao ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona. “Niainako ny fomba fitondra feno fanavakavahana satria napetraka taminà efitrano fakàna am-bavany mitokana mihitsy aho.” Nofaritany ny media fikatrohana ho toy ny fitaratra iray itarafana”ny toedraharaha henjana momba ny zon'olombelona ao amin'ny faritra”. Ho ohatra dia notondroin'i Zafri ny fitsaràna miaramila tamin'ny 2013 natao an'ireo voafonja ao Gdeim Izik, izay niafara tamin'ny famonjàna mandrapahafaty ireo Sahrawi sivily sivy. Vao haingana, niditra tamin'ny fitokonana tsy hisakafo nandritry ny 36 andro ireo voafonja noho ny politika. Rehefa nolavina tsy hahazo mitsidika azy ireo ny fianakaviana, dia nanao fihetsiketsehana tao Rabat, nihiaka ny “Tsy ara-drariny ny fitsarana miaramila.”
Miaraka miaiky amin'ireo Sahrawi marobe sy ireo fikambanana iraisampirenena i Zafri, izay te-hahita ny fanarahana maso ny zon'olombelona ho tafiditra ao anatin'ny asan'ny MINURSO, ilay iraka fampandriantany avy amin'ny Firenena Mikambana ao Sahara Andrefana. Ny fanarahana maso tahàka izany, hoy izy, dia “hahafahan'ireo Sahrawis midina an-dalambe sy mitaky ny zony.” Amin'izao fotoana izao, zara raha resahan'ireo mpanao gazety iraisampirenena na ireo mpisolovava ny resaka zon'olombelona ao Sahara Andrefana. Tany am-piandohan'ity volana ity, andianà Eoropeana iray niezaka hitsidika ireo voafonja tao Gdeim Izik no noroahan'ireo manampahefana Maraokàna hiala an'i Rabat. Noraràna tsy hanitsaka ilay faritra intsony ny Human Rights Watch.
Na izany aza, rehefa nifidy ny hanitatra ny asan'ny MINURSO ny Filankevi-Pilaminana androany, tsy dia nitondra fiovàna inona akory.
Lahatsary misy ireo fianakavian'ny voafonja noho ny politika, nanao hetsi-panoherana tao Rabat, Maraoka.Ireo sisa tavela mba handrakitra ireo fanararaotana ao Sahara Andrefana no mpikatroka avy amin'ny media ao an-toerana, toa an'i Zafri sy Dihani. Araka ny nolazain'i Zafri tamiko, atahorana ny fanaovany izay asany izay. “Tandindonin-doza mandrakariva aho, eny fa na tsy mandrakitra lahatsary akory aza.”
Mpanao gazety nipetraka tao amin'ny tobin'ireo mpitsoa-ponenana ao Sahara Andrefana i Habibulah Mohamed Lamin. Niasa toy ny mpandika teny sy lahatsoratra hoan'ireo mpitsidika ilay toby izy, isan'ireny ny WITNESS, ary izy no talen'ny Sampana “Equipe Media” tao Tindouf, andianà media mpikatroka mafàna fo izay mavitrika ao Sahara Andrefana.
25 Desambra 2018Fiteny